मैनालीको सांगीतिक प्रश्न : देश बनाउने जिम्मा कस्को ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मैनालीको सांगीतिक प्रश्न : देश बनाउने जिम्मा कस्को ?
स्वीडेन निवासी श्रष्टा ब्रिजेश मैनालीको देशभक्तिपुर्ण गीत यो देश बनाउने जिम्मा कसको हो को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रताप लामा र सहिमा श्रेष्ठले स्वर र दिपक शर्माको संगित रहेकये गीतको म्युजिक भिडियोको छायांकन तथा निर्देशन निलले गरेका हुन् । देशले वर्तमान अवस्थामा भोग्नुपरेको विकराल समस्याप्रति जिम्मेवार निकायहरुको वेवास्तामाथि खेद प्रकट गर्दैै गीतकार मैनालीले सबैले अधिकार प्राप्तिको नाममा कर्तव्य विर्सदै जाने हो भने यो देश बनाउने जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्नलाई बडो मार्मिकढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।
राजनीतिका नाममा भित्रीएको अराजकता, बन्द हड्ताल, चक्काजाम र त्यसले आममानिसको जीवनमा पारेको असरलाई भिडियोमा यथार्थपरक ढंगले देखाइएको छ । आर्थिक असमानता, सहमतिको नाममा हुने अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन र अवसर विहीनताका कारण भैरहेको युवा पलायनलाई गीतले समेटेको छ ।
‘मुलुकको राजनीतिक दिशाहीनताको शिकार भैरहेको जनताको भावना गीतमा बुनेको हुँ।’ – रोयल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट अफ स्टकहोमका स्कलर मैनालीले भने । उर्जाप्रविधिमा विधावारिधि गरेका मैनालीले गीतको रोयल्टिबापत प्राप्त हुने रकम बिपन्न बालबालिकाको शिक्षाको लागी खर्च गरिने बताए ।
म्युजिक भिडियोमा मनोज थापा, दीप शर्मा, रितेश श्रीवास्तव, शिवकुमार चम्लागाई, लक्ष्मना थापा, शैलेशमणि उपाध्याय, शोभिता पराजुली लगायतका करिब २० जना कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।